Ileta enye kubo bonke abahlobo bethu-cebisa ngendlela yokugcina kude ne-covid-19
Ngoku kunanini na ngaphambili, ngeli xesha lesidingo, ukuxhasana nganye kuye kwaba ngumsebenzi wethu. Sisonke siqhubela phambili ngomonde kunye nethemba ebusweni bokungaqiniseki.
Njengoko sisebenza nzima ukukhusela impilo nentlalo-ntle yethu, sinqwenela ukuba sabelane ngendlela yethu ukuthintela i-COVID-19. Ndiyathemba ukuba unokufumana isibonelelo kuyo.
1, nceda unxibe imask yobuso ukuba uphumile kwikhaya lakho, le yeyona nto ibalulekileyo njengoluvo lwam
Okwesibini, nceda uzame ukuphepha ukuthinta izandla nabanye
Okwesithathu, xa ubuyela ekhaya, nceda ubulale intsholongwane ngokungabikho ngaphantsi kwe-75% yotywala
Okwesine, zama ukwenza umthambo ngakumbi ukwenza umzimba wakho womelele ngokwaneleyo
5th, sela amanzi ngakumbi imihla ngemihla.
Xa ufumana iphakheji,
1, Bulala intsholongwane kuqala,
Okwesibini, nceda uyigcine ngaphezulu kwe iiyure ezi-3 kwindawo eyomileyo nenomoya, njengoko iindaba ezivela kwisiphumo, intsholongwane ayizukuphila ngaphezulu kweeyure ezi-3 ngesiqhelo emoyeni.
Iintliziyo zethu kunye neengcinga zethu zikunye noluntu lwehlabathi. Ithemba lethu kukuba sibe yintsingiselo yethemba kunye nomanyano njengokuba sisenza eli xesha lingazange libonwe. Sisonke sime kunye nawe kunye nabo ubathandayo.
Ixesha lokuposa: Feb-14-2020